Ku simaha Ra’iisul Wasaaraha Dalka oo Shacabka ugu baaqay in…
Mahdi Maxamed Guuleed (Qadar) ku simaha Ra’iisul Wasaaraha Dalka oo fariim muuqaal ah soo diray waxa uu uga hadlay muhiimadda ay leedahay Munaasabadda Ciidul Adxaa iyo waxyaabaha la doonayo in la sameeyo.
Guuleed ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed uu marka hore ugu mahadcelinayo maalintaan, isaga oo u rajeeyay Caafimaad, Barwaaqo iyo nabad, waxa uu ka dalbaday in ay u istaagaan midnimada.
“Farxad, baraare iyo nabadgalyo ku ciida Shacabka Soomaaliyeed meel waliba oo aad joogtaan, waxaana idin kala qayb-qaadaneynaa munaasabadda Ciidul Adxaa, 100% Dad Walaalo ah ayaan nahaya, aynu is gacansiino, aynu xusuusanayo keena u baahan caawinaadda” ayuu yiri ku simaha Ra’iisul Wasaaraha XFS.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Iyada oo laga duulayo saameynta cudurka Covid-19, waxaa guud ahaan inala habboon in aan ka taxadarno xannuunka safmarka ah oo aan la tacaalnay qaybtiisii ugu xoogga badneed, waana in aan qaadanayo talooyinka caafimaad ee dhaqaatiirta, waliba innaga oo ka qayb qaadaneyno munaasabaddaan weyn”.
Sii hayaha xilka Ra’iisul wasaaraha Dalka ayaa shacabka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan hay’adaha ammaanka Xukumadda oo ku howlan sugidda nabadgalyada, isla markaana ay ka dhowraan waxyaabaha aan u wanaagsaneen.
Maanta waa maalintii 1-aad ee Ciidul Adxaa, waxaa sanadkaan aad u yar dhaq-dhaqaaqa dadka, maadaama guud ahaan caalamka uu saameyay cudurka dilaaga ah ee Covid-19 oo kasoo aas-aasmay Jamhuuriyadda dadka Shiinaha.